I-china rewinder esemgangathweni kunye nabenzi beprinta yeTTO kunye nabathengisi | Baiyi
Igama lemveliso: Ukubuyisela umva okumgangatho kunye nomshicileli weTTO
Umzekelo: NGU-SR500-TTO / BY-SR500-UV / NGU-HR450-UV
Phawu:Yenzelwe iintlobo zeelebheli kunye nokupakishwa kwemfuno yefilimu. Ngokwemfuneko yetekhnoloji yokuprinta ileyibheli yendabuko kunye nokufaka iikhowudi kwimpawu yeelebheli, sizamile ukufikelela "kumatshini omnye ngokusetyenziswa okuninzi, kufanelekile ukubuyela umva kwefilimu kunye nokubuyiselwa kwelebheli kwakhona". "Umatshini omnye onemisebenzi eliqela, ulungele umshicileli weTTO kunye nenkqubo yokuprinta ye-UV ngokunjalo". "Umatshini omnye oneemodyuli ezininzi, iimodyuli kubume, abasebenzisi banokwenza ukhetho lweemodyuli ngokweemfuno zabo zemveliso". Olu lolona khetho lubalaseleyo kwileyibhile kuluhlu kunye nakwifilimu ekufakweni kweekhowudi.
Yamkela i-7inch HMI enemibala, i-PLC, iPC encinci yokulawula. Abantu banokwenza useto lweparameter kwi-HMI ngokweentlobo zefilimu kunye nolwakhiwo lwelebheli yephepha kunye nolwahluko wenqaku. Ngeli xesha, i-HMI iya kubeka esweni imeko yokusebenza ngexesha lokwenyani kwaye inike nealam nayo. Ukukhupha kunye nokuqokelela kwindlela yomgama phantsi kwenkqubo yokulawula, isantya esiphakamileyo sokunyusa, Ukuyekisa xa usima. Uphawu olumhlophe okanye ukubonwa kwemisebenzi njl. Ngokwenene yaqonda ulawulo olukrelekrele. ukuba abasebenzisi bafuna ukuphakamisa ukuchaneka kokuprinta, kukho umsebenzi omnye onokukhetha obizwa ngokuba yi-Auto ukulungisa inkqubo.
Olu luhlu lushicilelo olukrelekrele kunye nokubuyela umva kweeleyibhile kuluhlu, ifilimu kuluhlu, iphepha kuluhlu, ileyibhile ephothiweyo kuluhlu njl kwimfuno zokufaka iikhowudi kwimakethi yangoku. Ngokwento ekumva kokubuyela umva kunye nenqaku lemveliso kunye neendidi ezihlanganisiweyo zethekhinoloji yeemveliso. Ukusukela umatshini omnye ngeenjongo ezininzi .—— inokufaka iTTO umshicileli oshushu kunye nomshicileli we-UV njlnjl. “Umatshini omnye onemisebenzi emininzi” —— ukwanelisa iintlobo zeemfuno zetekhnoloji kwiintlobo zeshishini. "Umatshini omnye onokwahluka" -ukutya okokoko okanye okwexeshana, ulwakhiwo luyimodyuli, abantu banokukhetha ubumbeko ngokweemfuno zabo zemveliso. Yeyona ilungileyo yokukhetha izinto ezikuhlu. Ngokweemfuno zangoku zeshishini kunye nenqaku lobuchwephesha, ine-TTO yoshicilelo olushushu olushushu, umatshini oqhelekileyo wokuprinta i-UV, isantya esiphakamileyo sokuhlaziya. Abantu banokukhetha ukusebenzisa i-CIJ, okanye umshicileli we-TIJ, umshicileli we-laser, umshicileli we-TTO oshushu kunye nenkqubo yokuprinta i-UV yokwenza iikhowudi ngokweemfuno zokufaka iikhowudi.
"Umgangatho osemgangathweni weTTO wokushicilela ubushushu" uphuhliswa ngokwetekhnoloji yokuprinta ye-thermal, exhotyiswe nge-TTO roller roller kunye nokushicilela isibiyeli esonyukayo. I-HMI yamkela i-7inch touch touch screen, i-PLC kunye ne-PC encinci yokulawula. Ngokweentlobo zeefilimu kunye nolwakhiwo lweelebheli kunye nokwahluka kwento, abantu banokuseta ipharamitha yokusebenza kwi-HMI kwaye babeke iliso kwimo yokusebenza kwaye banike ialam. Ukulawula ukungqinelana okungagungqiyo kwenkqubo kunye nokujija, ukukhawulezisa / ukunyusa kancinci, ukuthintela ukuvala, uphawu olumhlophe okanye uphawu lokumakisha olunemibala, ukubala njlnjl. Wonke umsebenzi, ulwazile ngokwenene ulawulo olukrelekrele.
Uphuhliso "oluqhelekileyo lwe-UV rewinder" luphuhliso lwetekhnoloji yenkqubo yokuprinta ye-UV, inokufaka inkqubo yokuprinta, iplasma kunye nokuphilisa i-LED. I-HMI yamkela i-7 intshi yokubamba imibala, i-PLC kunye ne-PC encinci yokulawula. Ngokweentlobo zeefilimu kunye nolwakhiwo lweelebheli kunye nokwahluka kwento, abantu banokuseta ipharamitha yokusebenza kwi-HMI kwaye babeke iliso kwimo yokusebenza kwaye banike ialam. Ukulawula ukungqinelana okungagungqiyo kwenkqubo kunye nokujija, ukukhawulezisa / ukunyusa kancinci, ukuthintela ukuvala, uphawu olumhlophe okanye uphawu lokumakisha olunemibala, ukubala njlnjl. Wonke umsebenzi, ulwazile ngokwenene ulawulo olukrelekrele. "Isantya esiphakamileyo sokuhlaziya" sisekwe kumgangatho wokubuyela umva, isantya siphuculwe kakhulu kwaye isantya esizinzileyo sinokuba yi-100m / min. yeyamatheko akhethekileyo.
Umsebenzi wokukhetha: "Inkqubo yokulungisa ngokuzenzekelayo"
1. Umgangatho weTTO wokuprinta ngokufudumeleyo
2. Umgangatho we-UV wokuphrinta ngokutsha
3. Isantya esiphakamileyo sokuhlaziya
A. ubukhulu: L * W * H = 1200 * 1100 * 1200mm
B. ubunzima: 300KG
C. ombane: 220VAC 50 / 60HZ
D. amandla: malunga 2KW
Ukusebenza ngokukuko: malunga ne-200pcs / min (ithatha imveliso eyi-100mm yesalathiso, ikwanxulumene nesantya sokuprinta kunye nokuhamba rhoqo.)
Isantya esibaleka ibhanti: 2-60m / min (uhlengahlengiso oluqhubekayo)
Ubungakanani bemveliso ekhoyo: ububanzi bezinto: 30-480mm, ubukhulu bezinto ezingama-500mm; Ubunzima obukhulu bezinto ezingama-50KG
H. lungisa: ukulungiswa kwesakhelo (umsebenzi onganyanzelekanga) kunye nokuchaneka yi-± 0.25mm
Imoto: iimoto servo
Imveliso efumanekayo: BOPP, CPP, PET, PE, iphepha, ifilimu edibeneyo, ifilimu ene-aluminized njl.
K. ukukhulula uxinzelelo kulawulo: uxinzelelo lomgca lokulawula
L. ingqokelela yongquzulwano lolawulo:
Ubukhulu be-M.: 3inch (76mm)
Umzimba womatshini weNsimbi: intsimbi engenasici okanye icarbon ngepeyinti (umbala unokwenziwa ngokwezifiso)
O. indlela yofakelo: ufakelo lomgangatho wangaphandle, ngaphandle kweintanethi.
Umsebenzi wokukhetha: inkqubo yokulungisa ngokuzenzekelayo.
A. ubukhulu: L * W * H = 1600 * 1150 * 1070mm
B. ubunzima: 800KG
Ukusebenza ngokukuko: malunga ne-100-1000pcs / min (ithatha imveliso eyi-100mm yesalathiso, ikwanxulumene nesantya sokuprinta kunye nokuhamba rhoqo.)
F. ibhanti yokubaleka isantya: 10-100m / min (uhlengahlengiso oluqhubekayo)
Imveliso efumanekayo: ububanzi bezinto ezingama-30-440mm, ubuninzi bezinto ubukhulu be-450mm; ubunzima bezinto ezingama-50KG
Imoto: iimoto ezihamba ngesigaba esinye
K. ukukhulula ulawulo lwengxwabangxwaba: ulawulo lwengxwabangxwaba rhoqo
L. ingqokelela yongquzulwano lolawulo: ukungalawuleki rhoqo koxinzelelo
Egqithileyo uthotho iqonga lokondla Intelligent
Okulandelayo: Umatshini wokondla amakhadi okrelekrele
uthotho iqonga lokondla Intelligent